Bilaogy Libiana: Tony Blair, Voanketsihetsy, Dona sy Tahotra ary Andro Tena Mafana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2017 17:04 GMT
(Marihana fa lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Mey 2007 ity adika eto ity)
Azo antoka fa nandritra ireo roa andro lasa ireo, nalaza tamin'ny resaka fitsidihan'ny praiministra britanika Tony Blair i Tripoli. Tsy mbola nahita fiarovana napetraka toy izany aho nandritra ny androm-piainako. Azonao vinavinaina ny lalan'ny vahiny manam-boninahitra tamin'ny fandrindràna ny fiarovana. Raha izany no zavatra azon'i Tony Blair, inona no hitranga raha manapa-kevitra haka fotoana hitsidika antsika i Andriamatoa Bush alohan'ny handaozany ny Trano Fotsy?
Tsy liana amin'ny lafin'ny dian'i Blair ihany ilay bilaogera Highlander, fa ny zava-nisy koa fa nitsidika ny fianakavian'ireo ankizy Libiana voan'ny aretina SIDA izy.
“Fanapahan-kevitra tsara momba ny seraseram-bahoaka [..] izany satria tsy dia mahita fangoraham-po na fikarakarana azy ireo amin'ny fampahalalam-baovao aho fa avy amin'ny mpanampy mpitsabo Boligara irery ihany fa tsy misy tsy avy amin'ny dokotera Palestiniana.”
Tsy maintsy misaotra ny Jeneraly Graziani isika noho ny famoronana ny tetikady ‘dona sy tahotra’ izay natao voalohany tamin'ireo Libiana nandritra ny fanjanahantany fasista taloha tao Italia.
Nitady tantara iray hafa mahaliana i Gheriani, manentana anao aho mba hamaky ny lahatsorany hahafantarana ny habibiana.
Ity manaraka ity ny sombiny avy amin'ny zavatra nambaran'ny Dr. Asad izay nolazain'i Gheriani:
“Nampihatra ny tetikady vaovao amin'ny fanaovana fanafihana tampoka amin'ny alalan'ny vondro-tafika amim-piara ao amin'ny toby Bedouin ny Italiana, mamono olona sy biby tsy misy fanavakavahana, ary manimba ireo fitoeram-boa. Amin'ireny fanafihana ireny, izay heverina fa olom-pirenena sivily amin'ny ady tsy ara-panjanahatany, ny tanjona dia ny hamono Bedouin maro dia maro araka izay tratra, hampisy fampihorohoroana ao ampon'ireo mpiandry ondry ao Syrenaika. Rehefa avy ny orana ka tsy azo ampiasaina intsony ny fiara fitaterana, dia nodarohana baomba sy notifirina avy eny an-habakabaka indray ny toby.”
Tamin'ny fanamarihana iray hafa ny fisian'ny (sehatra) mpanangom-baovao ho an'ireo bilaogera Libiana izay nanazavan'ny Libyano ny maha-Lybia an'i Libya miaraka amin'ny sary nofidiny دلاع -‘voanketsihetsy’.
Farany, mieritreritra aho fa ireo bilaogera Libiana ireo dia tahaka ny Libiana hafa rehetra sahirana amin'ny fanadinana faran'ny taona ny fianakavian'izy ireo. Na amin'ny asara (andro mafana) izay niposaka tampoka tamintsika tamin'ity herinandro izay misy fiantraikany amin'ny famahanana bilaogy. Nisy namana iray nilaza tamiko fa 49 degre Celsius amin'ny Alahady. Araho tsara ny zavatra niainan'i Libyano, nilaza izy fa andro mafana sarotra izany:
Manokatra varavarana aho
Niketrona ny endriko
Mitsangana ny voloko
Mitete hatsembohana ny handriko
Miraikitra ny lelako
Tena andro mahatsiravina (dikan-teniko)